FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PEEK-A-POM - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Peek-A-Pom
Alika mifangaro mifangaro Pomeranian / Pekingese
Poochie the Peek-A-Pom (antsasaky ny Pekingese antsasaky Pomeranian) amin'ny 6 taona
Ny alika Peek-A-Pom dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pomeranian ary ny Pekingese . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Pomine
Registra ny famolavolana endrika = Pominese
Mpanoratra International Canine Registry®= Peekapom
'Nalaiko ireo sarin'ny iray amin'ireo Peke-A-Pom keliko kely tamin'ny 9 herinandro. Ity karazana ity dia tena mamy miaraka amin'ny palitao tsy mampino, tarehy fisaka ary vatana fohy sy volo. Pups tena bitika - latsaky ny iray kilao amin'ny 9 herinandro. '
mpiandry alemanina ary mifangaro alika any an-tendrombohitra bernese
Alika kely Peke-A-Pom amin'ny 9 herinandro (alika mifangaro Pomeranian / Pekingese)
'Ity i Vicki. Peek-A-Pom mainty volontany / mainty izy. Nahazo azy aho tamin'izy vao herinandro vitsivitsy, alika mahafinaritra be izy. Tiany ny miforitra sy mihazakazaka ary tsy misy toeran-kaleha manokana, saingy tsy te handray izany izy. Tiany ny mihazakazaka mankany amin'ny olon-tsy fantatra hilalao na inona na inona misy taona. Mikimpy izy rehefa faly amin'ny zavatra iray. Aleony manodidina azy ny olona toy izay ny alika mitovy habe aminy na lehibe kokoa. Halany ny avela irery irery ao an-trano toy ny alika hafa. Miavaka izy ary manana toerana manokana ato am-poko. '
'Ellie the Peek-a-pom na' Pominese' — ny reniny dia Pekingese iray madio, ray Pomeranian iray madio. '
'Ity i Ellie. Peek-A-Pom mainty volontsôkôlà / mainty 2 taona izy na 'Pominese.' Ny reniny dia Pekingese madio, ray Pomeranian iray madio. Nahazo an'i Ellie izaho sy ny vadiko tamin'izy 8 herinandro. Milanja 8 kilao i Ellie. Ny reniny dia 13 pounds, rainy 6 pounds. Alika mahafinaritra izy, manana toetra lehibe. Somary sahirana izy nampiofana. Saingy rehefa azony ilay izy dia 'azony.' Tena izy a amboa lap . Aleony miaraka amin'ny olony noho ny alika hafa. Izy mandeha an-tongotra ary mankafy mitaingina ny tanàna mankamin'ny fivarotana biby amin'ny faran'ny herinandro. Tiany ny kilalao masiaka, nefa tsy dia lehibe amin'ny fakana sary na lalao. Milamina be izy ao anaty trano. Hisafidy toerana izy ary hatory mandritra ny ora maro. Mora dia mora ny mianatra tetika i Ellie. Mihodina izy ary manao azy rehetra baiko fototra . Izany alika kely vaky trano ary mino mafy aho crate fiofanana ! Mihevitra ny vatany ho toy ny 'fandriany' kely izy izao ary miditra ao aminy isan-kariva amin'ny fotoana mitovy. Alika mahafinaritra izy, tsy afaka nangataka bebe kokoa izahay. :) '
Mabel the Peek-A-Pom (alika mifangaro Pomeranian / Pekingese) amin'ny 4 taona
Toby the Peek-A-Pom amin'ny faha-3 taonany
Ny fialambolin'i Toby the Peek-A-Pom dia kamo. Hoy koa ny tompony: 'Heveriko fa izy no alika kely indrindra hitako hatramin'izay! Manana toetra mampihomehy izy ary alika mahafinaritra ... '
'… Na dia tsy tena mankafy mitafy toy ny serfa aza i Toby amin'ny Krismasy!'
Maverick Pete Mitchell ny Pomeranian / Pekingese mix (Peek-A-Pom, antsoina koa hoe Pominese)
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Peek-A-Pom
Sary manintona-A-Pom 1
fifangaroana mpiandry ondry australianina mini
afangaro amin'ny omby lehibe ny pit bull
Shih Tzu yorkie afangaro efa lehibe feno
mixer boxer bulldog anglisy taloha